Amabhuzu asebusika aseFinland asebusika
Amabhothi asebusika aseFinland amabhotshi asebusika amamodeli afanele futhi afudumele akwenziwa emafrijini amaningi eFinland, ecabangela ukuthuthukiswa kwamuva kwezobuchwepheshe emkhakheni wokukhiqiza izicathulo. Amabhuzu anjalo ahlukaniswa nekhwalithi ephezulu yokubheka kanye nobuhle bamamodeli.
Amabhoti asebusika asebusika aseFinland
Igama elithi "amabhuthusi asebusika aseFinland" sekuyisikhathi eside lifana nekhwalithi elihle kakhulu nezinto ezifanele izimo zethu zezulu. Into ewukuthi eFinland kunesimo sezulu esinzima, ubusika bubandayo futhi buqhwa, kodwa kungase kube khona i-thaw ngokuzumayo nge-slush kanye ne "porridge" emanzini naseqhweni. Izimo ezinjalo azivamile ezweni lethu. Ngakho-ke, ngenxa yesimo sezulu sethu, izinhlobonhlobo ze-Finns ezisungulwe emakethe yazo zifanelekile, kodwa ke zaqala ukuthunyelwa kwamanye amazwe.
Enye inzuzo yezicathulo zasebusika ezivela eFinland yukuthi lezi zikhumba ziyizinga eliphakeme kakhulu. Lokhu kusebenza ezintweni ezenziwe kuzo, nokuthunga. Ama-boots aseFinland asebusika avame ukwenziwa ngesikhumba noma nge-suede emanzini omvelo, enikeza amazinga aphezulu okulondoloza ukushisa. Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi amaningi aseFinland anomlando omude, futhi izinkampani zokuqala zezinyawo zenziwe ngesandla. Yingakho kulezi zindwangu kukhona isimo sengqondo esithuthumela kakhulu, futhi ukulawulwa kwayo kunikelwa ukunakwa okukhethekile. Futhi isipiliyoni samakhosi sikuvumela ukuthi wenze amamodeli amakhulu.
Noma kunjalo, iFinland iyakhathalela kakhulu ukuthuthukiswa kwezicathulo ezifudumele, ngakho-ke lezi zikhumba zisezingeni eliphezulu. Okokugcina, kubalulekile ukuphawula ububanzi obukhulu kunazo zonke amabhoti ebusika . Akukhathazi nje kuphela ukubonakala kwezicathulo, kepha nokuthi yikuphi abesifazane oklanyelwe khona. Ngakho-ke, ungathola ukhetho olubanzi lwezinsikazi zaseBfinish zasebusika emlenzeni ogcwele , kanye nezinketho zesakhiwo sezinyawo ezahlukene.
Amafemu amabhuthini aseFinland
Amabhoti asebusika aseFinland abesifazane abakhiqizwa amafemu amaningi, kokubili amakhulu nezincane. Ake sithi amanye abakhiqizi abaziwa kakhulu, izicathulo zabo eziqhubekayo ukuthunyelwa ngaphandle futhi zidumile ngenombolo enkulu yokulinganisa kanye nekhwalithi eliphezulu yezinto zokwakha kanye nokulungisa.
Owokuqala, mhlawumbe, ukucacisa inkampani yezicathulo eFinland okuthiwa uJanita (Janita). Amabhuzu ngaphansi kwalolu hlobo angatholakala ezitolo eziningi ze-inthanethi namapulatifomu wangempela wokuhweba. Le nkampani isebenzisa ubuchwepheshe bayo bekhanda nobuciko obuhlukile, izinsika ezikhethekile zokusika kanye nokuthunga, ukufakwa okusezingeni eliphezulu ekukhiqizeni izicathulo zayo. Ngakho-ke, okukhiphayo akuyona nje enhle kuphela, kodwa futhi kunezigaba ezimbili ezihambayo zesihlangu. Ezinhlobonhlobo zamamodeli walenkampani ungathola kokubili amabhuzu aphezulu-ebhodini namabhodlela, nezinyathelo ezincishisiwe, kanye nezinyawo zezinyawo. Umklamo wombala uvinjelwe kakhulu futhi uyingqayizivele, futhi inqubomgomo yentengo ingcono kakhulu.
Olunye uhlobo lwezicathulo zaseFinnish ngu- Aaltonen . Le nkampani ikhona iminyaka engaba ngu-125 futhi phakathi nalesi sikhathi iye yathola udumo njengomkhiqizi ophethe kahle izicathulo zekhwalithi ephezulu kakhulu. Inkazimulo yale nkampani ibilokhu igubha kusukela ezikhathini zeSoviet Union, ngoba ngisho nangaleso sikhathi amamodeli angaphansi kwalolu hlobo adluliselwa emadolobheni ethu futhi ashaywa njengama pies ashisayo kusuka kumanqamu. Manje inkampani iyaqhubeka ikhiqiza izicathulo zasebusika eziphezulu futhi ihlale ithuthukisa izibonelo zayo ngenxa yentuthuko yakamuva. Isibonelo, emabhokisini alo mkhiqizo i-sole ekhethekile "i-Antigololed" isetshenziswa.
Enye inkampani yezicathulo zaseFinnish yiKuoma . Amabhuzu avela kulo mshini abe nomklamo owodwa wezemidlalo futhi afanele amantombazane aphila ngendlela esebenzayo. Zilungele izimo zethu zezulu. Ezikhunjini ezinjalo, ungahlala isikhathi eside kakhulu emoyeni ovulekile ngaphandle kokwesaba ukugoqa izinyawo zakho noma ukuzenza zimanzi ngesikhathi semvula.
I-jeans yabhanana yabesifazane
Ama-sweatshirts abesifazane abakhulelwe
Izicathulo ze-Calipso zabesifazane
Beautiful uzizwa amabhuzu
Izikhumba zezimbuzi zezimvu zesifazane
Amabhoti ama-ugg ebusika abesifazane
Yini ongayidla ikati inzalo?
Pepper in ijusi utamatisi
Yeka ukuthi ungalimaza kanjani isibalo ngesikhathi sedili?
Yeka kanjani okumnandi ukupheka ama-navaga epanini lokuthosa?
I-sweatshirt emnyama - yini okufanele ugqoke isici sefashini se-wardrobe?
I-eyeliner ye-liquid - ithuluzi elihle kakhulu lebhalobhathi ephelele
Yini ewusizo for plum cherry?
Indlela yokufeza i-orgasm yangasese?
Imibala yezinwele ezenziwe imfashini 2016
Izingubo zokugqoka ezide
Ukhilimu ubisi oluncibilikile nebhotela
I-Sura ne-ayah ikhipha ama-jinn
I-Latvia National Opera
I-Church of Saints uPeter noPawulu (Ostend)
I-Tallinn - izivakashi ezikhangayo
Izinhlobo zobumnene nezici zazo
Ukuhlinzeka nge-plastiki engaphumelelanga
I-angina enobudlova ezinganeni
Ingane inganikwa nini isinkwa?
Ukukhwehlela okunomsoco emntwaneni ngaphandle komkhuhlane
Kungani uphupha ukudansa?
I-albhamu yezinhlamvu zemali ngezandla zakhe